Curiosities 10 any Paris izay hamela anao hiteny | Vaovao momba ny dia
Curiosities of Paris izay hamela anao hiteny
Monica sanchez | | General, Paris, Inona no ho hita
Paris dia tanàna iray izay manana betsaka azo atolotra. Toerana feno hatsarana izay hamoizanao tena eo amin'ny vahoaka na ireo tsangambato tsy mampino izay mandravaka ny renivohitra, rehefa mankafy ny toetrandro mahafinaritra mandritra ny taona.
Miaraka amin'ny velarantany 105 kilometatra toradroa, ary miaraka amina fahagagana marobe hita eo amin'ny lafiny rehetra, azo antoka fa Curiosities 10 an'ny París fa holazaiko aminao, tsy fantatrao izy ireo.
1 Zoron'i Egypt ao an-drenivohitra
2 Misy sarivongana telo an'ny fahalalahana!
3 Ho an'ny sakafo maraina, mofo ary fromazy. Ary ho an'ny sakafo atoandro, ary ho an'ny sakafo hariva ...
4 Azonao an-tsaina ve i Paris miaraka amin'ny guillotine goavambe?
5 Ny Latin Quarter, toerana misy atmosfera be indrindra
6 Kilometatra aotra, eo amin'ny kianjan'i Notre Dame
7 Nisoroka ny fananana distrika 13 i Paris
8 Tohatra miolikolika ao amin'ny Louvre Museum
9 Mistery an'ny katedraly Notre Dame
10 Miarahaba, zavakanto
Zoron'i Egypt ao an-drenivohitra
Ny Louvre Museum Pyramid dia noforonin'ny mpanao mari-pahaizana Ieoh Ming Pei, ary notokanana tamin'ny 1989. Manana haavo 20,1m izy ary 673 ny tontonana fitaratra feno laminated. Miaraka amin'ny lanjan'ny 180 taonina, ny ao anatin'ny mari-pana dia mitovy amin'ilay voasoratra ao amin'ny piramidan'i Cheops, any Egypte: 51 degre Celsius. Inona koa, manana refy mitovy.
Misy sarivongana telo an'ny fahalalahana!
Ny malaza indrindra dia any Etazonia, atsimon'ny nosy Manhattan, fa misy replika roa any Frantsa: ny iray any Colmar, notokanana tamin'ny 2004, ary ny iray tany Paris. amin'ny Nosy Swan. Ity farany dia noforonin'ny mpanakanto italianina-frantsay Auguste Bartholdi, ary notokanana tamin'ny 4 Jolay 1889.
Ho an'ny sakafo maraina, mofo ary fromazy. Ary ho an'ny sakafo atoandro, ary ho an'ny sakafo hariva ...
Raha efa naheno olona nilaza ianao fa mihinana mofo sy fromazy isan'andro ny Paris ary tsy mino an'izany ianao dia diso ny anao. Ho azy ireo, fototra ireto sakafo roa iretoHany ka manara-dalàna mihitsy aza izy ireo mba hahazoana baguette tsara indrindra sy fromazy tsara indrindra. Ary tsara toy inona moa ny fanamboarana vao ...!
Azonao an-tsaina ve i Paris miaraka amin'ny guillotine goavambe?
Kely sisa no nanangana azy. Ary izany dia, ho an'ny Universal Exhibition ny taona 1889, nisy ny fifaninanana natao handrafetana asa goavana, izay tokony hiafara amin'ny dian-tanàna. Anisan'ny tolo-kevitra hafa, nisy ny manangana guillotine avo 274 metatra, ho fahatsiarovana ny fandraisan'i Frantsa anjara tamin'ity fanao ity. Soa ihany, tamin'ny farany, nanapa-kevitra ny hanangana ny Eiffel Tower, izay tsy misy manafintohina ary afaka mirehareha manana soatoavina haingo avo.
Ny Latin Quarter, toerana misy atmosfera be indrindra
Any atsimon'ny Ile de la Cité no misy azy, ary iray amin'ireo tanàna akaiky indrindra. Nandritra ny vanim-potoana Medieval, dia onenan'ireo mpianatra niteny latina izy io. Tokony holazaina fa io dia iray amin'ireo toerana mafana mandritra ny Revolisiona Mey 1968, na dia toerana mangina aza izao, misy trano fisakafoanana sy kafe mahafinaritra izay manasa anao hipetraka sy hiala sasatra.
Kilometatra aotra, eo amin'ny kianjan'i Notre Dame
Tsy ny afovoan'i Frantsa, fa i Paris. manomboka amin'ity teboka ity, avy amin'ny Point Zéro izay antsoin'izy ireo hoe, azonao atao ny manisa ny halaviran'ny lalana rehetra eto an-tanàna. Any amin'ny faritra dia ambara matetika fa izay manitsaka azy dia mety hiverina, satria ny vintana dia miaraka amin'izy ireo mandritra ny fotoana ijanonany.
Tsy fantatsika raha marina izany na tsia, fa azo antoka fa manintona ilay toerana.
Nisoroka ny fananana distrika 13 i Paris
Ny isa 13 dia (ary mbola, ankehitriny, ny kolontsaina maro) no nihevitra ny isan'ny vintana ratsy. Nandritra ny Tolom-piavotana frantsay 1795, 12, ary fizarana 48 no naorina, saingy tsy te-hametraka iray hafa izy ireo noho ny tahotra sao ho latsaka amin'ny fahasoavana ny tanàna. Zavatra tsy mazava fa tsy nitranga, satria ankehitriny dia manana distrika 20 izy ary velona kokoa noho ny hatramin'izay.
Tohatra miolikolika ao amin'ny Louvre Museum
Afaka mahita sy mampiasa tohatra miolikolika mahafinaritra isika ao amin'ny Tranombakok'i Louvre. Saingy, fantatrao ve fa misy karazany isan-karazany ary samy hafa ny fiasan'izy ireo? Izy ireo dia singa izay misarika ny saina betsaka, hany ka nandany 10 taona nandinika azy ireo ny mpanao mari-trano fanta-daza. Ankehitriny dia nahavita asa mahavariana izy, izay nitantarany ny tantarany, ny maha-zava-dehibe ananan'izy ireo, ny anton'ny fahombiazany, ary maro hafa. Raha mila fanazavana fanampiny, dia ampirisihinay hamaky ny mari-pahaizana momba ny dokotera an'ny mpanao mari-pahaizana Alberto Sanjurjo.
Mistery an'ny katedraly Notre Dame
Izy io no katedraly Gothic malaza eran-tany, ary tsangambato be mpitsidika indrindra any Paris. Azonao jerena ao amin'ny Ile de la Cité, misy ilay gargoyles izay mamindra ny rano amin'ny tafo, izay inoana fa nifoha izy ireo ny alina nandorana an'i Joan of Arc teo amin'ny tsato-kazo.
Tsy ampy ny miteny hoe Bonjour na Bonsoir (araka ny tranga misy) amin'ny feon-kira mahazatra, fa kosa manazatra betsaka ka mivoaka voajanahary araka izay azo atao. Tian'ireo Parisianina ny fiteniny, ka raha miarahaba azy ireo indrindra ianao, satria tsy misy ny fahalavorariana tanteraka- fiarahabana tonga lafatra, manome toky anao aho fa hankafizinao bebe kokoa ireo resaka ifanaovanao amin'izy ireo.
Tanàna iray i Paris izay mahavery foana ny fahafinaretana, indrindra rehefa avy namaky ireo fahalianana ireo, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Paris » Curiosities of Paris izay hamela anao hiteny
Santa Lucia, fahavaratra mandritra ny taona
Mandehana mankany Krakow, inona no ho hitanao ao an-tanàna